Ka qeybgalida dugsiga Swedish ee markii ugu horeysay | Skolverket nyanlända
Canugaaga wuxuu bilaabayaa midkood fasalka dugsiga barbaarinta – fasal hal sano ah oo mutadwacnimo ah – ama ‘grundskola’ – dugsiga qasabka ah ee sagaalka sanno. Waxaad wax badan ka ogaaneysaa nidaamka dugsiga Swedish halkan. Inta badan ee aad taqaanid, inta badan ee aad saameyn kartid dugsiga canugaaga.
Dugsiga waa dimuquraadi
Waxbarashada waxay siisaa ardayda cilmi, siiba dhiirigelinta lagu baranayo wax badan noloshooda oo dhan. Ardayda waxaa taageero macalimiintooda si ay uga caawiso inay gaaraan sharuudaha waxbarashada ee waxbarashadooda. Arday walba waa inay u suurtogashaa inuu hormariyo filashadooda buuxdo.
Waxbarashada waxaa loo qaabeeyay si dimuquraadi ah oo way ixtiraamtaa xuquuqda aadanaha iyo dimuquraadiga. Dhammaan ardayda waxay xaq u leeyihiin sinnaanta waxbarashadooda, iyaddoon loo eegin jinsigooda, aaminaada, curyaannimada, dookha galmada, ama halka ay kaga noolyihiin Sweden. Arday walba muhiim ayuu ka yahay dugsiga, oo dugsiga wuxuu marwalba tixgeliyaa waxa u wanaagsan ardayga ee qorsheynta howlahooda. Sweden waxay leedahay labadaba dugsiyada degmadda iyo dugsiyada madaxa banaan, ee ay maamulaan shirkadaha ama ururada. Ka qeybgalka grundskola waa qasab, laakiin khasab maaha dugsiga barbaarinta. Dhammaan dugsiyada waa bilaash.
Qof walba wuxuu meel ka helayaa dugsiga
Degmadda aad ku nooshahay ayaa kuu sheegi doonta wax ku saabsan dugsiyada degmaddaada. Waad codsan kartaa dugsiga aad rabtid inuu canugaaga ka qeybgalo. Websaydka www.valjaskola.se wuxuu leeyahay macluumaad ku saabsan dugsiyada kala duwan iyo nidaamka qoondeynta meelaha. Waxaad sidoo kale weydiin kartaa degmadda halka aad ku noo shahay.
Dugsiga ayaa go’aansada fasalka ardayga uu bilaabayo
Dugsiga wuxuu qiimeynayaa waxbarashada hore ee canugaaga, aqoonta, waaya aragnimada, iyo danaha. Qiimeyntan waxaa inta badan lagu sameeyaa caawimada turjubaanka. Labba bilood gudahood, maamulaha ayaa go’aan ka gaadhi doona heerka iyo fasalka canugaaga ka qeybgalayo. Si markaas loogu barto af Swedish si dhaqso ah oo suurtogal ah, ardayda dhawaanta yimid waxay ka qeybgali karaan fasalka diyaarinta iyo fasalkooda joogtada. Diyaarinta fasalka ardayda waxay baranayaan aasaaska af Swedish, laakiin suurtogalka maadooyinka kale sidoo kale. Waxay ka qeybgalayaan fasalka diyaarinta oo ugu badnaan labbo sanno ah. Fikrada waa mid ardayda ay ku baranayaan maadooyinka waqti buuxo fasalkooda caadiga ah sida ugu dhaqsaha badan ee suurtogalka ah. Maamulaha ayaa go’aan ka gaadhaya goorta canugaaga uusan markale u baahneyn inuu ka qeybgalo fasalka diyaarinta.
Ugu yaraan hal macalin ayaa ka masuul noqonayo fasalka canugaada. La xiriir macalinka canugaaga haddii aad wax su’aalo ah qabtid. Haddii aad u baahantahay turjubaan, weydii dugsiga caawimo.
Dugsiga wuxuu rabaa inuu kula shaqeeyo adiga
Dugsiga ayaa ku soo ogeysiinayo waxbarashada canugaaga oo kugu marti qaadaya kulamada macalimiinta iyo masuulada kale. Waa muhiim inaad akhrido macluumaadka aad hesho oo ka qeybqaado kulamada.
Masuulada iyo ardayda waxaa looga wacayaa inay ka qeybgalaan hormarinta wadahadalka hal jeer xiligiiba. Ardayda dugsiga barbaarinta, wada hadalka hormarinta waxay dhaceysa ugu yaraan haljeer sannadka dugsiga. Waxaad kahadli doontaa horumarka cunugaaga si wada jir ah ilmahaaga iyo macalinkooda. Fursada muhiimka ah ee lagu baranayo wax badan ee ku saabsan waxbarashada canugaaga.
Sawirka wuxuu tilmaamayaa qof ah inaad la xiriirtid markaa aad su’aalo qabtid ama faalooyin.